Anchor Drill Rig Factory | China Anchor Drill Rig mpanamboatra, mpamatsy
QDG-2B-1 Valan-drambo fandavahana
Ny milina fandavahana vatofantsika dia fitaovana fandavahana amin'ny fanohanana amin'ny lalambe mitrandraka arintany. Manana tombony miavaka izy amin'ny fanatsarana ny vokam-panohanana, ny fihenan'ny sandan'ny fanampiana, ny fanafainganana ny hafainganan'ny làlana, ny fihenan'ny fitaterana fanampiana, ny fihenan'ny asa, ary ny fanatsarana ny tahan'ny fampiasana ny fizarana làlana.
QDGL-2B Vatofam-pandavahana vatofantsika
Ny rig fandavahana injeniera feno vatofantsika feno dia ampiasaina amin'ny fanohanana sy fanaraha-maso ny fananganana tranobe, ny fitsaboana ny loza voajanahary ary ny fananganana injeniera hafa. Ny firafitry ny rig fandavahana dia mitambatra, miaraka amin'ny chassis crawler sy clamping shackle.
QDGL-3 Vatofam-pandavahana vatofantsika
Fampiasana amin'ny fananganana an-tanàn-dehibe, fitrandrahana harena an-kibon'ny tany ary tanjona maro, anisan'izany ny fidirana amin'ny sisin-tany mankany amin'ny fototra lalina, lalambe, lalamby, fitahirizana ary fananganana tohodrano. Hanamafisana ny tionelina ambanin'ny tany, fanariana, fanamboarana tafo fantsona, ary fananganana hery alohan'ny fihenjanana mankany amin'ny tetezana lehibe. Soloy ny fototra amin'ny fananganana trano taloha. Miasa ho an'ny lavaka mipoaka ny ahy.
SM820 Vatofantsika fandavahana vatofantsika
SM series Anchor Drill Rig dia azo ampiharina amin'ny fananganana bolt rock, tady vatofantsika, fitrandrahana ara-jeolojika, fanamafisana orina ary antontam-pitana mikraoba ambanin'ny tany amin'ny karazana toe-tany ara-jeolojika toy ny tany, tanimanga, vatokely, tany-bato ary stratum mitondra rano;